American Airlines Inozivisa Yekutanga Yakananga Miami kuDominica Flight
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » American Airlines Inozivisa Yekutanga Yakananga Miami kuDominica Flight
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Dominica Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Gurukota rezveKushanya, Anokudzwa Denise Charles akataura kuti sevhisi nyowani iyi ichave inoshandura mutambo muindasitiri yezvekushanya muDominica sezvo ichibvumidza mukana wakaringana uye wakananga kubva kumatunhu eUS, imwe yemisika huru yekuenda.
Basa idzva richashanda kaviri pasvondo neChitatu neMugovera.
Ndege ichasimuka Miami International Airport na11am uye ichisvika kuDouglas-Charles Airport na3: 21pm.
Ndege dzichasiya Dominica na4: 24pm uye dzosvika kuMiami na6: 55 pm.
Ministry of Tourism, International Transport and Maritime Initiatives vanofara kuzivisa chisimbiso icho American Airlines Jet sevhisi ichatanga mashandiro kekutanga nguva pakati Miami (MIA) uye Dominica (DOM) kutanga Chitatu Zvita 8, 2021. Iyo sevhisi ichashanda kaviri pasvondo neChitatu neMugovera, ichibva kuMiami International Airport na11am uye ichisvika kuDouglas-Charles Airport na3: 21pm. Ndege yekudzoka ichasiya Dominica na4: 24pm uye inosvika kuMiami na6: 55 pm. Ndege ichave iyo Embraer jet ine bhizinesi kirasi, yakawedzera huru uye hupfumi zvigaro.
Iyi sarudzo yakakosha neAmerican Airlines inouya mushure mekubudirira kwekuratidzira ndege kwakaitika kuDominica musi wa22 Chikumi, 2021. Gurukota rezveKushanyirwa Anokudzwa Denise Charles akataura kuti sevhisi nyowani iyi ichave inoshandura mutambo weindasitiri yekushanya muDominica sezvaizobvumidza. nyore uye yakanangana nekuwana kubva kuUS mainland, imwe yemisika huru yekuenda. Zvakare, danho rakatorwa neAmerican Airlines rekushandira Dominica rinosimbisa kukosha kwekuti Dominica senzvimbo yekushanya uye ichabatsira zvakanyanya kuzadzisa tarisiro yedu yevaenzi mazana maviri ezviuru panosvika gore ra200,000. kumanikidzwa kwakatarisana nekwaienda pamusoro pemakore. Kuwana kwakananga kunotora chinzvimbo chakakosha mukuwedzera kushanya, kusimudzira kutengeserana, kunyanya kumaMSME, nekufambisa kubatana kwemhuri uye bhizinesi.
Director we Tourism VaColin Piper vakati nebasa idzva iri, vatambi vekushanya vekuUS vanozonzwa vane chivimbo kuwedzera Dominica kune zvavanopa zvigadzirwa. Dominica ichabatsirwa nekuwedzera kukwidziridzwa kwemhando dzakasiyana dzemhuri yeDominica -kutiza uye yepamusoro-kumagumo zvivakwa, pamwe nekukweva, kukwira makomo, kugwinya uye zviitiko zvechikafu kune vatengi vavo. Vashanyi vanobva kuUS avo vanga vachifarira kuuya kuDominica izvozvi vachakwanisa kusvika pano zvakanyanya kureruka kubva panguva yekugadzirira ndege kuenda kuDominica.
American Airlines inoramba yakafara zvakaenzana nezve iyi nendege nendege. "Tinodada nekuenderera mberi nekusimbisa huvepo hwedu muCaribbean nenzvimbo mbiri nyowani dzichitanga muna Zvita, Dominica neAnguilla, zvichipa vatengi vedu mukana wekuwana nzvimbo dzavanoda kuenda," akadaro Jose A. Freig, Mutevedzeri weMutungamiri weAirlines. yeInternational. "Nezvi wedzero kune yedu nzira network, veAmerica vachashandira makumi matatu neshanu nzvimbo muCaribbean - yakanyanya kune chero mutakuri weUS".